Lahatsary: ​​Teknolojia Email sy Fivoarana | Martech Zone
Lahatsary: ​​Teknolojia sy fitomboana amin'ny mailaka
Zoma, Jolay 22, 2011 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Niasa sy niasa tamin'ny Emailvision nandritra ny roa taona lasa. Ny iray amin'ireo tanjany lehibe dia ny fifandraisana amin'ny mpampiasa amin'ny fiteny maro sy ny fanohanana manokana ny fiteny maro. Ampio ny fampidirana azy ireo ara-tsosialy sy ny fitaovana angon-drakitra ho avy, ary tsy mahagaga raha miaina fitomboana tsy mampino toy izany ny Emailvision:
Manararaotra Hafatra 100 tapitrisa isan'andro.
Over Hafatra 5 miliara isam-bolana.
famonoana Fampielezan-kevitra 350,000 isam-bolana.
Over 8,500 mpampiasa mavitrika.
97.5% manerantany fahaterahana (manaitra amin'ny ISP iraisam-pirenena)
Mahatalanjona 100% fotoana fohy amin'ny tsy misy latency!
Laharana # 1 amin'ny valin'ny Google amin'ny CTR 18.2%